ह’तियार सहित आएका भारतीय प्रहरीलाई ‘गो’ली ठोक’ भन्दै यसरी लखेटे नेपालीले (भिडियो सहित)
July 28, 2020 1470
कञ्चनपुरमा स्थानिय बासीन्दाले तारवार र वृक्षारोपण गर्न लाग्दा भारतीय प्रहरीले अवरो’ध गरेपछि नेपालीले प्रतिकार गरेका छन् । उनीहरुले गुगल म्याप खोलेर नेपालको भूमी रहेको र आफुहरु’लाई तारवार र वृक्षरोपण गर्न रोक्न नमिल्ने भन्दै प्र’माण देखाएका छन् ।
नेपालीले सिमाना स्थित नेपालकै भूमीमा वृक्षारो’पण गर्न लाग्दा भारतीय एसएसवी आएर रोक्ने प्रयास गरेका थिए । नेपालीह’रुले तत्काल गुगल खोलेर नेपाल र भारतको सिमाना कहाँ पर्छ हेर्नुस् भन्दै म्याप देखाएका थिए ।
स्थानियले तिमीहरु पनि नेपालकै भूमीमा आएको भन्दै प्र’तिरोध गरेका थिए । भिडियो’मा देख्न सकिन्छ हामी हाम्रो जमिनमा वृक्षारोपण र तारवार गर्छाै गो’ली हाने हान भन्दै प्रतिकार गरेको सुन्न र देख्न सकिन्छ । नेपाली स्थानियले गुगल म्यापवाट नेपाल र भारतको सिमाना देखाउँदा भारतीय प्रहरीले त्यो हामी मान्दैनौ भनेको सुन्न सकिन्छ ।
भारतीय प्रहरीले त्यसो भनेपछि एक नेपालीले भनेको सुनिन्छ, तार त हामी जसरी पनि लगाउँछौं गो’ली हाने हान, गोविन्द गौतम’लाई तिमीहरुले हानेकै हो । स्थानियले प्रति’कार गरेपछि भारतीय प्रहरी फर्केर गएको पनि भि’डियोमा देख्न सकिन्छ ।
भारतीय प्रहरीले सिमानामा बस्ने नेपालीलाई यस्तै दुख दिने गरेका छन् । त्यतीबेर नेपा’ली स्थानिय र भारतीय प्रहरीको विवाद भइरहदा नेपाल प्रहरीको भने उपस्थिती थिएन । विवा’द सकिएर भारतीय प्रहरी फर्किएर गएपछि नेपाल प्रहरी पुगेको पनि भिडि’योमा देख्न सकिन्छ ।
स्थानियले भारतीय प्रहरीहरु ह’ति’यार सहित आएको र आफुहरुले फर्काइदिएको भन्दै नेपाल प्रहरीलाई सुनाएको पनि भिडि’योमा देख्न सकिन्छ । एक जना स्थानिय भन्छन्, भारतिय प्रहरी ह’ति’यार लिएर यहाँ आउँछन् तर नेपाल प्रहरी लठ्ठी पनि लिएर जान पाउँदैन । – ताजा खबर
Prevसाउनमा किन खान हुँदैन माछामासु ? यस्तो रहेछ वैज्ञानिक कारण
Nextभोलि साउन १४ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आहा ! हात-खुट्टानै यस्तोसम्म भएका बाबुका यी भाइरल रमाइला टिक`टकहरु (हे`र्नुस् भिडियो )
केहीदिन अघिमात्र छोरा गुमाएर अचेत बनेकी आमाले पनि संसार छाडिन् , राहत लिएर गएकानै मलामी बने (भिडियो)
विवाहको अन्तिम तयारी गर्दागर्दै श्वेता खड्काले यसरी सम्झिईन् स्व. श्रीकृष्णलाई (भिडियो हेर्नुहोस)
दुख’द खबर : मिक्स्चर मेसिनमा बेरिएर युवकको मृ`त्यु….